Madaxweyne Siilaanyo Oo Qalinka Ku Duugay Dhaqangelinta Miisaaniyada 2013 | Araweelo News Network (Archive) -
Hargeysa(ANN)Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa maanta Qalinka ku duugay Dhaqan gelinta Miisaaniyad sanadeedka qaranka ee 2013-ka, taas oo shalay Golaha Wakiiladda Somaliland duuduub ku Ansixityeen.
Sidaana waxa lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay qasriga Madaxtooyada Somaliland, kaas oo uu ku saxeexnaa Afhayeenka Madaxtooyadda Somaliland Axmed Saleebaan (Dhuxul). qoraalkaa ayaa u dhignaa sidan:-
Xeerkan oo lagu baahinayo dhaqan-galka Miisaaniyad Sannadeedka 2013-ka ee Dawladda Dhexe, Dawladaha Hoose, Baanka Dhexe, Dekedda Berbera, Wakaaladaha Biyaha, Haamaha Shidaalka Berbera, Warshadda Laydhka Hargeysa, Warshadda Laydhka Berbera, Mad-bacadda Qaranka, Wasaaradda Duulista iyo Hawada iyo Deeqda Sanduuqa Trust Fund iyo Lifaaqyada ku lamaan, laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 31-12-2012 ay dhaqal tahay miisaaniyada qaranka ee 2013-ka.” ayaa lagu yidhi qoraalka Madaxtooyada Somaliland.
Dhinaca kale golaha wakiilada Somaliland ayaa shalay duuduub ku ansixiyay Miisaaniyada. kadib markii wasiirka Wasaaradda Maaliyadda C/casiis Maxamed Samaale horgeeyay golaha.